COVID-19: mety ho lasa tanàna iray hafa any New York i Honolulu ary mampitandrina ny ben'ny tanàna Caldwell
Home » Lahatsoratra farany farany » Podcasts » COVID-19: mety ho lasa tanàna iray hafa any New York i Honolulu ary mampitandrina ny ben'ny tanàna Caldwell
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Podcasts • Safety • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Nampitandrina ny ben'ny tanànan'i Honolulu Caldwell fa betsaka ny olona mety ho faty, ary mety ho lasa toa an'i New York i Honolulu. Androany i Hawaii dia nandrakitra 140 trangana aretina COVID-19 vaovao, ary 3 no maty tany Aloha State. Betsaka ny sampahom-boaloboka notaterina avy tany Honolulu.
Hoy ny ben'ny tanàna Caldwell: “Mila mivondrona isika vahoaka eto amin'ity nosy tsara tarehy nefa marefo ity. Mila mamonjy antsika tsirairay avy isika, ny malalantsika indray mandeha ary eny koa mamonjy ny toekarentsika.
Momba ny fiainana sy ny fahafatesana izao, ary ny toekarena salama dia miankina amin'ny vahoaka salama.
Ny valanaretina iray ao amin'ny lapan'ny tanànan'i Honolulu, fantatra amin'ny anarana hoe Honolulu Hale, dia tonga ao an-tranon'ny Ben'ny tanàna Caldwell. Izy tenany ihany no nosedraina ary miandry valiny anio.
Nisahotaka ny ben'ny tanàna fa nahazo alalana ny miaramila sy ny namany handà ny fameperana ny fitrandrahana fanjakana ary manome toky fa efa misy izany. Caldwell dia tsy niresaka momba ny habetsaky ny valanaretina tamin'ny fametrahana miaramila tany Oahu ary nanentana ny Manampahefana Federaly hizara izany tahiry izany sy handrindra ny ezaka.
Ny distrikan'i Honolulu dia manana vondron'orinasa mpiambina fanampiny miisa 160 misambotra olona izay tratra amoron-dranomasina, valan-javaboary, manitsakitsaka ny lalànan'ny hotely na ny quarantine. Anisan'izany ireo olona tratra ivelany na any amin'ny magazay na trano mihidy nefa tsy manao facemask.
Tsy misy intsony ny fampitandremana ary ny lamandy na ny fotoan'ny fonja no vokatr'izay tsy miraharaha ny baiko vaovao 4-herinandro nataon'ny Ben'ny tanàna Caldwell.
Tsy fotoanan'ny fizahantany izao, na dia efa ho potika aza ny toekarena ao amin'ny Fanjakana.